Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-India State ngoku iJolisa kuKhenketho oluQinisekayo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
Ukhenketho lweOdisha oluzinzileyo
I-Odisha yoKhenketho izolo iququzelele "uKhenketho loHlumo oluBandakanyayo - UkuKhangela kunye neNdlela eya phambili" ngokudibeneyo ne-FICCI, njengenxalenye yemibhiyozo yoSuku lweHlabathi lezoKhenketho lowama-2021.
Umyalezo ovela ku-Mphathiswa oyiNtloko we-Odisha ubonakalise isidingo sokhenketho oluqhutywa luluntu.
U-Odisha unikezela ngechibi elingafakwanga lamava okhenketho.
Ngelixa ukhenketho luqhubeka umlo walo ngokuchasene nobhubhane, i-Odisha Tourism ithatha amanyathelo akhawulezayo ngophuhliso olumanyanisiweyo lwecandelo lezokhenketho likarhulumente elizinzileyo elixhasa ukubuyiselwa koqoqosho ngokubanzi.
UMphathiswa oyiNtloko uMnu.Naveen Patnaik, URhulumente wase-Odisha, uthumele umyalezo obonisa isidingo seziko lokhenketho oluzimeleyo, olunoxanduva kunye noluntu. Umyalezo wafundwa ngexesha lewebhu nguMnu.Sachin Ramchandra Jadhav, uMlawuli kunye neAddl. Unobhala, iSebe lezoKhenketho, uRhulumente waseOdisha.
Uthe: "Odisha izisa idama elingafakwanga lamava okhenketho lweniche. Ngaphandle kwemiceli mngeni ebangelwe ngulo bhubhane, siye sabona amandla kunye nokomelela okuboniswe ngabachaphazelekayo kukhenketho kunye nomoya wokubuk 'iindwendwe ekwakheni indawo ekhuselekileyo, ekhuselekileyo nenobutyebi obenza ukuba abahambi baphonononge iOdisha- Eyona Mfihlo igcinwe eIndiya.
“Umxholo woSuku lweHlabathi lezoKhenketho lowama-2021 uthi uKhenketho loHlumo oluBandakanyayo. Njengoko icandelo lokhenketho nokhenketho liqhubeka nedabi lalo nxamnye nobhubhane, i-Odisha Tourism ithatha amanyathelo akhawulezayo ngophuhliso olumanyanisiweyo lwecandelo lezokhenketho likarhulumente elizinzileyo elixhasa ukubuyiselwa koqoqosho ngokubanzi. Ukhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva luyinto engaphakathi ku-Odisha.
"Ukhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva luyinto engaphakathi ku-Odisha. Iminikelo yethu ephambili ijolise kuluntu. Iphulo lika-Odisha lokuwina amabhaso okhenketho lweenkampu zendalo ezilawulwa luluntu libonisa le modeli kwileta nangomoya. Siye sazisa iSkimu sase-Odisha Homestay Establishment Scheme 2021 ukwenza ukuba kudaleke amava okhenketho olumandla ngokusebenzisa iindawo zokuhlala ezingafundiswanga kwiindawo ezahlukeneyo ezingafumanekiyo ezinenkcubeko etyebileyo ngelixa sonyusa amashishini endawo kwaye sandise ubomi beendawo zasemaphandleni.
“Kwiinzame zethu zokuseka iOdisha njengendawo yezokhenketho yemigangatho yehlabathi, sisebenza ngokubonakalayo kuphuhliso lweziseko zophuhliso ngocwangciso oluhlanganisiweyo lokucwangciswa kweendawo eziphambili ezichongiweyo kwilizwe liphela ngokuthatha inxaxheba koluntu kunye nokubandakanya kwamashishini ongezelelweyo okongeza ixabiso njengemisebenzi yezandla kunye nokukhuthaza I-Odia Cuisine eyiyo. ”
Umnumzana Jyoti Prakash Panigrahi, UMphathiswa wezoKhenketho, uLwimi lweOdia, uNcwadi kunye neNkcubeko, uRhulumente waseOdisha, uthe uOdisha uphinde wasebenzisa isicwangciso kunye nombono wokhenketho kwindawo ye-COVID ngelixa uqinisekisa ukuba ukhuseleko luphambili.
Eqaqambisa amandla amakhulu okhenketho kurhulumente, uMnu Panigrahi uthe: “SineeNdawo ezizodwa zomhlaba, inkcubeko edlamkileyo kunye neendawo zelifa lemveli eOdisha. Njengoko kukhankanyiwe nguMphathiswa oyiNtloko oHloniphekileyo, urhulumente wethu uzibophelele ekukhathaleleni ukhenketho lwezendalo ngendlela eqhutywa luluntu ekwalondolozekayo. Urhulumente ukwaphumelele imbasa yeSilivere “ngelona Kona liPhambili likaRhulumente eliPhambili” kwi-6th India Responsible Tourism Awards. U-Odisha uyinkokeli kwezoKhenketho nezeMidlalo. Urhulumente ukwakhokele kwamanye amacandelo amaninzi afana nokuxhotyiswa kwabasetyhini okuxeliswa ngamanye amazwe. ”
Ukongeza, uMphathiswa ukwacacisile kuKhenketho lweeKharavani, umgaqo-nkqubo kaRhulumente Indiya , kwaye wakhankanya ukuba urhulumente uthatha onke amanyathelo ngqo ukusuka ekudalweni kweziseko ezingundoqo ezifunekayo kuKhenketho lweeKharavani ukuya kwimveliso yokugqibela ukuqinisekisa ukuba oku kugqityiwe kwaye kuzalisekiswa kungekudala.